Madaxweynaha "xanuunsan" ee Aljeeriya oo guul loo filayo - BBC News Somali
Madaxweynaha "xanuunsan" ee Aljeeriya oo guul loo filayo
Image caption Madaxweynaha Aljeeriya Cabdicasiis Butafliqa
Dadka reer Aljeeriya ayaa u dareeraya goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha xukumi doona aljeeriya , iyadoo dadka indha indheeya siyaasadda aljeeriya ay tilmaamayaan in mdaxweyne Cabdicasiis Butafliqa lafilayo in uu mar afaraad ku guuleysto madaxtinimada aljeeriya.
Buutafliqa ayaa da'diisu tahay 77 jir ayaa mar mar dhif ah u soo baxa goobaha dadweynaha tan iyo markii uu sanad ka hor maskaxda dhiig uga furmay kaddibna lagu soo daweeyey dalka faransiiska, isagu hadda ma hoggaaminayo ololaha doorashadiisa oo inta badan lama arko tabar dari darteed.
Waxaa doorashada kula tartamaya Butafliqa Ra'iisalwasaarihiisii hore Cali Binu Faliis oo ah kan ugu culus lix ka mid ah ragga la tartamaya Butafliqa.
Binu Faliis , wuxuu ka digey in doorashada ay ka dhacdo ku shubasho iyo wax isdabamarin , .Waxaa lasheegayaa in ururada isbahaysiga Islaamiyiinta iyo kuwa cilmaaniyiintuba ay ku baaqeen in doorashada aan laga qayb galin iyagoo sabab uga dhigay in aaney caddaalad u dhaceynin oo ay rumeysan yihiin in lagu shubanayo.
Image caption Dalka waxaa laga qabtay dibedbaxyo looga soo horjeeda dowladda
Dadka ka soo horjeeda is sharaxaadda Butafliqa , ayaa waxay sameeyeen bannaanbaxyo ay ku baaqayaan in aan laga qayb galin doorashada , laakiin ciidamada ammaanka aljeeriya aya kala cayriyey oo ka hortagey, iyadoo ammaanka doorashada ay sugayaan 260 kun ooo ciidamada ammaanka ka tirsan iyo milatariga aljeeriya oo iyaguna sheegay in ay heegan u yihiin ilaalinta goobaha codbixinta oo gaaraya 50 kun oo xarumood dalka oo dhan. Dad tiradoodu kor u dhaafeyso 22 malyan ayaa isu diiwaan geliyey si ay codkooda u dhiibtaan hasa yeeshee , lama oga inta codeyn doonta.
Taageerayaalka Butafliqa , ayaa iyagu waxay qabaan in Butafliqa uu ku habboonyahay in markale ladoorto sababtuna ay tahay , kaalintii uu ka soo qaatay soo afjariddii dagaalkii sokeeye ee aljeeriya iyo sida uu hadda uga badbaadiyey dalka kacdoonadii ka dhacay dalalka carabta qaarkood.
Dalka Aljeeriya , ayaa waxaa uu ahaa dalkii ugu horeeyey dalalka carabta oo islaamiyiintu ay ku guuleystaan markii ugu horeysey oo doorasho xor ahi ka dhacdo dalkaasi 1990. Waxaana doorashadaasi ku guuleysatey Jabhaddii bad baadada islaamiga ahayd oo uu Hoggaaminayey Sheekh Cabbaas Madani , oo haatan degen dalka Qadar. Milatariga ayaa jabhaddaasi xukunka ka tuuray ka dibna dagaal sokeeye oo muddo dheer socday oo kumanaan qof ay ku dhinteen ayaa ka dhacay aljeeriya.
Si kastaba ha ahaatee waxaa la isweydiinayaa xataa haddii Butafliqa ku guuleysto doorashadaan sida uu awood uu wax ku xukumo oo yeelan doono waayo, waxaa dadka ka soo horjeedaa ay ku dhaliilayaan in uu yahay nin aad sakaraad u ah oo haddan aad duq u ah. Maalmaha soo socda ayaa la ogaa doonaa halka Aljeeriya u dhaqaaqdo.
Aljeeriya oo doorasho loo dareeray
100 ku dhimatay shil diyaaradeed Algeria